China LVP Automatic Light Inspection Machine (PP bottle) ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya IVEN
Igwe nyocha akpaaka akpaaka
Enwere ike itinye igwe nlele anya akpaaka na ngwaahịa ọgwụ dị iche iche, gụnyere injections ntụ ntụ, ntụtụ nhicha ntụ ntụ, obere vial/ampoule injections, nnukwu karama iko/karama plastik IV infusion wdg.
Igwe nnwale ọkụ akpaka LVP Okwu Mmalite:
Enwere ike ịhazi ọdụ nyocha dị ka mkpa ndị ahịa si dị, yana enwere ike ịhazi nyocha ezubere iche maka ndị mba ọzọ dị iche iche na ngwọta, ọkwa ndochi, ọdịdị na akara wdg.
N'oge nyocha mmiri dị n'ime, a na-agbatị ngwaahịa a na-enyocha ka ọ kwụsie ike n'oge ntụgharị ọsọ ọsọ, igwefoto ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-ese foto iji nweta ọtụtụ onyonyo, nke a na-ahazi site na nlele anya algorithm n'onwe ya mepụtara iji kpee ikpe ma ngwaahịa a nyochara ruru eru. .
Ọjụjụ akpaaka nke ngwaahịa erughị eru. Enwere ike ịchọta usoro nchọpụta niile, echekwara data na -akpaghị aka.
Igwe nyocha akpaka dị elu nwere ike inyere ndị ahịa aka belata ọnụ ahịa ọrụ, belata ọnụego njehie nyocha oriọna ma kwe nkwa nchekwa nchekwa ndị ọrịa.
Igwe nlele ọkụ akpaka LVP Njirimara:
1.Akpaghị aka mezue nkewa nkewa n'ime karama, wee kpochapụ ngwaahịa nwere nkwarụ na -akpaghị aka dịka nsonaazụ nnwale.
2.Ọ nwere ike tụgharịa karama a na -akpaghị aka ka enyocha ya na oke ọsọ, nke na -enyere mmegharị nke adịghị ọcha mmiri aka ma na -eme ka nyocha ahụ dị mfe.
3. A na -eji ụkpụrụ onyonyo anya iji chọpụta ma ọ kacha zie ezi ikpe ihe mba ọzọ a na -ahụ anya.
Ọrụ 4.PLC HMI, metụ ụdị akara njikwa LCD.
5.Ọ nwere ike ịchọpụta ntụpọ nke yiri mgbaaka, oghere ntụpọ ojii na okpu karama.
6.Waterproof Ọdịdị imewe nakweere obere, nke bụ adaba maka ihicha gbajiri kalama. Enwere ike iji mmiri sachaa mpaghara karama gbajiri agbaji ozugbo.
LVP akpaka ọkụ nnyocha igwe Uru:
1.Adopt sistemụ mbanye servo zuru oke iji ghọta oke ọsọ, kwụsie ike na ịrụ ọrụ nke ọma ma melite ogo nnweta onyonyo.
2. Njikwa servo na -akpaghị aka na -agbanwe ịdị elu nke efere na -agbagharị iji kwado ngbanwe nke karama dị iche iche nke nkọwa dị iche iche, na ngbanwe nke akụkụ nkọwa dị mma. 8
3.Ọ nwere ike ịchọpụta ntụpọ nke yiri mgbaaka, oghere ntụpọ ojii na okpu karama.
4. Ngwanrọ a nwere ọrụ nchekwa data zuru oke, na-ahazi usoro nnwale, chekwaa (ọ nwere ike ibipụta) nsonaazụ nnwale, na-eme ule KNAPP, wee chọpụta mmekọrịta mmadụ na igwe.
5. Akụrụngwa nwere ọrụ nyocha na -anọghị n'ịntanetị, nke nwere ike ịmụba usoro nchọpụta na nyocha.
LVP igwe nyocha ọkụ na -akpaghị aka teknụzụ teknụzụ:
Karama rọba 50-1,000ml / karama PP dị nro
Eriri, ntutu, ihe mgbochi ọcha na ihe ndị ọzọ anaghị agbaze, afụ, ntụpọ ojii na ntụpọ ndị ọzọ
AC 380V, 50 Hz
Igwe ikuku ikuku abịakọrọ
Ike mmepụta Max
LVP akpaka ọkụ nnyocha igwe na -arụ ọrụ usoro:
Nke gara aga: 30ml karama karama karama na -ejuputa na igwe ịcha akwa maka ọgwụ
Osote: Mkpokọta Mkpa Mgbakọ Ọbara
Igwe anaghị agba nchara PC
Ime akpa na-adịghị ịkwanyere
Non-ịkwanyere nro Bag OEM
Igwe nyocha nke sirinji emejupụtara
Ndị na -emepụta sirinji emejuputara
Igwe Ampoule À Coudre Singer, Disposable ntụtụ & agịga Production Line, Igwe eji emejuola agịga, Igwe Njuputa Ejuju Ejupụtara, Igwe Ampoule À Coudre Led, Ampoule Machine À Coudre Bernina,